दाजुको मृ:त्युपछि घर फर्किएका भाईको बाटैमा मृ:त्यु । – Life Nepali
डोटीका एउटै घरका दाजुभाईको कोरोना संक्रमणका कारण मु’त्यु भएको छ ।११ दिनअघि भारतको गु’जरातबाट फर्केका दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१ घटालीका युवकको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायव उपरिक्षक इन्द्र मल्लले बताए । उनका अनुसार भारतमा सँगै काम गर्ने उनका दाजुको कोरोना संक्रमणका कारण गत शनिबार भारतमा मृ’त्यु भएको थियो । दाजुको मृ’त्युपछि घर फर्केका ती युवकको पनि कोरोनाकै कारण मृ’त्यु भएको आशंका गरिएको छ। युवकको मृ’त्युपछि गाउँका स्थानीय त्र’सित छन्। *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
सामान्य स्वास्थ्य सम’स्यापछि एकाएक छ’टपटाहट बढेको र मंगलबार घरमा उनको मृ’त्यु भएको हो। त्यस्तै काठमाडौंमा को’रोना भाइरस (को’भिड–१९) संक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको छ ।कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गु’माउनेमा दाङका एक पत्रकार रहेका छन् । मृ’त्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ निवासी दामोदर अधिकारी रहेका छन् । केही हप्ता पहिले टा’इफा’इड देखिएपछि उपचाररत अधिकारीको पिसिआर परिक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
गत चैत २७ गते उनको पि’सिआर रिपार्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनी घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आ’इसोलेसनमा उपचाररत थिए । श्वा’सप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि पछिल्लो अवस्थामा उनको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको थियो । उपचारको क्रममा उनको मंगलबार बेलुका साढे ९ बजे नि’धन भएको हो । उनी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि आ’बद्ध थिए ।उता मकवानपुर र पर्सामा २ कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु भएको छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous करिब एकसय गिद्ध मृ,त फेला, अचानक कसरि मृ,त्यु भयो यी गिद्दको ?
Next सन्दीपलाई इतिहास रच्ने मौका, बन्नेछन् यो ‘कीर्तिमान’ बनाउने पहिलो बलर!